Sonos Ray dia tsara, tsara tarehy ary tsy ho fialan-tsiny ny vidiny [Hevitra] | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 07/06/2022 13:00 | General, hevitra
Sonos Orinasa fantatray lalina, marika izay na dia eo aza ny kalitao tsy azo lavina amin’ny vokatra azony dia nanana sakana ho an’ny besinimaro hatrany: Ny vidiny. Tsy ho fialan-tsiny intsony izany amin'ny fahatongavan'ny Sonos Ray, ny fanamafisam-peo farany notsapainay ary tsy misy mahafoy na inona na inona, dia lasa mora indrindra.
Izahay dia mijery lalina ny Sonos Ray vaovao, ny fanamafisam-peo vonona hametraka ny fototry ny tsena sy ny feo tsara amin'ny vidiny tsara indrindra. Fantaro miaraka aminay, holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba azy, ny firafiny ary indrindra ny famakafakana azy.
1 Fitaovana sy endrika: marika trano
2 Ny feo, ny zava-dehibe indrindra
3 Nahoana no mora kokoa?
4 Fa mbola Mpanjaka izy... avelao i Sonos hoe
Fitaovana sy endrika: marika trano
Ity Sonos Ray ity dia nahavita niala tamin'ny famolavolana ny Sonos Beam, izay hatramin'izao no Sonos soundbar mora indrindra hita eny an-tsena. Fohy kokoa izy io nefa midadasika kokoa, ary misy halalin'ny lamosina izay mahasarika ny maso mihitsy aza. fa izany dia manasa ny fametrahana azy ao amin'ny lavaky ny fahitalavitra. Na izany aza, mitazona ny makarakara misy teboka eo anoloana, ny fanaraha-maso eo an-tampony ary mazava ho azy ny fifandraisana ao aoriana.
Toy ny mahazatra, afaka mividy azy amin'ny loko roa ihany isika, matte mainty sy matte fotsy. Ny refesina dia 559 x 955 x 71 milimetatra amin'ny lanjany 1,95 kilao. latsa-danja kokoa noho ny Sonos Beam, zavatra mahagaga amin'ny unboxing.
Ny fisehon'ny fanamafisam-peo dia any aoriana tanteraka, ka tsy hanana olana amin'ny fametrahana azy ireo na ny fandaminana, indrindra raha apetraka eo ambanin'ny fahitalavitra. Mandritra izany fotoana izany, manana vatofantsika roa ho an'ny fonon-drindrina mahazatra efa fahita any Sonos, any aoriana.
Mahaliana ity tsipiriany ity, saingy manana fandrefesana tonga lafatra izy mba hametrahana azy ao anaty lavaka ao amin'ny fanaka efitrano fandraisam-bahiny IKEA mahazatra… misy vintana ve? Indray mandeha indray Sonos dia nanao vokatra izay toa minimalista ary mahatsapa ho ambony.
Ny feo, ny zava-dehibe indrindra
Ny kalitaon'ny feo, toy ny amin'ny famokarana, dia manana fenitra avo lenta ao amin'ny orinasa, noho izany ny atiny katalaogy. Na izany aza, tian'i Sonos ny mitazona tsara ny tsiambaratelo ara-teknika amin'ny fitaovany, na manao ahoana na manao ahoana ny fiezahantsika hiditra ao. Na izany na tsy izany, ny fametrahana ny bara Sonos Ray dia misy ao anatiny:
Fanamafisana nomerika efatra Class-D amboarina amin'ny rafitra acoustic ny bar.
Mpandahateny midrange roa fahaiza-manao avo lenta mifanaraka amin'ny frequences bass sy vocal.
mpibitsika roa Ampifanaraho mba hanome valiny madio amin'ny hafainganam-pandeha avo.
Indrisy anefa fa tsy afaka manome anao ny salan'isa na hery amin'ny watts aho, zavatra mahagaga ahy ihany koa izany, fa anisan'ny majika an'i Sonos izany, mety hieritreritra ianao fa manafina zavatra izy ireo, fa raha vao manomboka izany ianao dia tsy ho hitanao hoe inona izany. dia . Ny endrika audio tohanana dia:
Mba hanomezana feo malefaka indrindra azo atao, dia mampiasa teknolojia izy io Bass Reflex System amboarina amin'ny acoustics an'ity fitaovana manokana ity, ankoatra ny rafitra Trueplay fa amin'ny alàlan'ny fitaovana iPhone dia hamakafaka ny tontolo iainana ary hamindra ny feo ho any amin'ny toerana tokony hahatongavany.
Ny vokatr'izany dia feo mifandanja sy mifandanja tsara, ary manavaka tsara ny mozika sy ny sarimihetsika, mameno efitrano kely na antonony tsara.
Nahoana no mora kokoa?
Andeha ho tapaka amin'ny fanenjehana, ity Sonos Ray dia mitentina 299 euros, izay 200 euros latsaka noho ny fanamafisam-peo mora indrindra amin'ny orinasa manaraka. ny Sonos Beam, ary 700 euros katroka raha oharina amin'ny sainam-pirenen'ilay marika, Sonos Arc, ka... maninona no mihena ny vidiny?
Tsotra, Sonos dia nanala ny seranan-tsambo HDMI-ARC, midika izany fa voafetra amin'ny tariby audio optika ny fifandraisana mivantana, noho izany, mba hamerenana ny votoatin'ny fahitalavitrantsika dia tsy maintsy manitsy ny fivoahan'ny tariby optika isika ary mitantana ny feo amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fahitalavitra mihitsy.
Izany dia ahafahana manara-penitra tena avo lenta, ny famoahana audio optika dia miakatra (na tsara kokoa) noho ny HDMI, saingy mametra anao amin'ny resaka fifandraisana amin'ny fahitalavitra izany.
Mazava ho azy koa resy isika virtoaly feo mifanaraka amin'ny lalana Dolby Atmos, noho izany dia tavela amin'ny stereo PCM mahazatra isika. Farany, tsy manana mikrô koa izahay ary noho izany dia tsy hifanaraka amin'ny mpanampy virtoaly, anisan'izany ny "Hey Sonos" vaovao nambaran'ny marika.
Fa mbola Mpanjaka izy... avelao i Sonos hoe
Mazava ho azy fa fitaovana Sonos ny fitaovana Sonos. Ho an'ity dia manana fampiharana izay ahafahanao manitsy ny fanatsarana ny fifanakalozan-kevitra, tena zava-dehibe mba handrenesana ny feo eo ambonin'ny tabataba sy ny mozikan'ny sarimihetsika.
Afaka milalao amin'ny Spotify Connect izahay avy amin'ny Sonos na Spotify mivantana ny mozika ankafizinay, mifanaraka amin'ny Mozika Apple, Deezer sy ny mpamatsy hafa, tsy manadino ny zava-misy fa fitaovana misy fifandraisana WiFi mifanaraka miaraka amin'ny AirPlay 2 avy amin'ny Apple, noho izany dia tsy misy fetra ny fandefasana sy fandefasana mozika mivantana.
Mifototra amin'ny ny fifandraisana WiFi 802.11n, na raha ilaina amin'ny alalan'ny tariby tambajotra 10/100 Ethernet izay tafiditra ao anatin'ilay fitaovana. Mba hanampiana antsika isan'andro dia manana mpandray IR izay hanampy antsika hitantana haingana ny fahitalavitra sy ny feo.
Mba hanitsiana azy, tsotra toy ny misintona ny fampiharana Sonos, maimaim-poana ho an'ny Android sy ho an'ny iOS/iPadOS izay hanao fikarohana haingana sy hahita ny Sonos Ray-nao eo no ho eo, ny sisa dia ny mamely ny "manaraka" sy ny fiandrasana. Raha mbola misalasala ianao, ny lahatsary miaraka amin'ity reveiw ity dia ahitana fampianarana kely momba ny fametrahana ny Sonos Ray.
Tiako ny mahatonga azy ireo ho mora amiko, ary raha ao anatin'ny salan'isa antonony / avo dia manoro hevitra foana izahay Sonos Beam, amin'ny vidin'ny vidiny. Ray izahay, izany hoe manomboka amin'ny 200 euros dia tsy afaka manoro fanamafisam-peo hafa ankoatra an'ity aho.
Raha toa ka vato misakana ho anao ny tsy fisian'ny Dolby Atmos, mpanampy feo virtoaly ary HDMI eARC (ny ankamaroan'ny fitaovana dia tsy manana iray na roa amin'ireo fitaovana ireo), Tsy isalasalana fa ny Sonos Ray no tsara indrindra amin'ny tsena amin'ny sandan'ny vola.
Amidy ilay fitaovana ho an'ny 299 euros ao amin'ny tranokalan'ny Sonos ofisialy ary amin'ny Amazon, toy ny any amin'ny toeram-pivarotana mahazatra (El Corte Inglés sy FNAC).
Navoaka tamin'ny: 7 junio 2022
Fanovana farany: 4 junio 2022
Wireless fifandraisana amin'ny zavatra rehetra
Tsy fahampian'ny mpanampy virtoaly
tsy misy HDMI
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tsara ny Sonos Ray, tsara tarehy ary tsy ho fialan-tsiny ny vidiny [Review]